Tantara sy fiavian'ilay soavaly arabo | Soavaly Noti
Betsaka ny tantara sy angano momba azy niandohan'ny soavaly arabo. Fa ny zava-misy dia hatramin'izao dia azo lazaina ho hany tokana amin'ity hazakazaka an'arivony taona ity izay nonina tany Arabia taloha ary nitaingenan'ny Bedouins. A Purebred, notehirizina nandritra ny taonjato maro ny fandinihana am-pahendrena sy henjana an'ireo vahoaka mpifindrafindra monina nonina tany Saikinosy Arabia.
Adidintsika amin'izy ireo fa izy ireo no voalohany nampihatra ny hevitra momba ny fiompiana sy ny fisafidianana biby miorina amin'ny razamben'ny razambe, fianakaviana ary lalan-drà. Izy ireo dia nitady kalitao hafa, ny fahadiovan'ny fiaviany, ny fanoherana ary ny hafainganana be amin'ny ady satria ireo toetra rehetra ireo dia nitahiry ny fiarovana ilay mpitaingina azy.
Misy asa soratra ary koa misy sokitra izay nanomboka ny soavaly arabo hatramin'ny taona 2000 talohan'i JK, izay midika fa karazany mpanorina izy fa tsy misy ramifisaka na lakroa, koa antsoina hoe Pure Breed, izay zokiny indrindra, farafaharatsiny, izany no nahitana ireo firaketana.
Ny mampiavaka azy dia ny hafainganam-pandehany noho izany ny soavaly arabo voalohany dia ireo izay nifaninana tamin'ny hazakazaka. Taty aoriana dia nanitatra faritany maro samihafa izy ireo satria izy ireo no soavaly lavorary ho an'ny ady sy ny fandresena. Ilay soavaly arabo dia iray amin'ireo notadiavina indrindra ary notakiana mba hamoahana karazana mitovy amin'izany amin'ny tanjona manokana.
Ary ny filazan'ny mpahay tantara ny soavaly Arabo noho ny fahadiovany amin'ny rà no tonga lafatra indrindra hanatsarana ny karazany, noho izany dia tadiavin'izy ireo ho ilay loharano voalohany amin'ny kalitao sy ny hafaingananaAndroany dia mbola izy no voalohany amin'ny sehatry ny fanoherana. Ary azo lazaina fa, tamin'ny lafiny sasany, ny firazanana Arabo dia nandray anjara tamin'ny famoronana saika karazan-tsoavaly maoderina.
Raha te hahafantatra bebe kokoa momba Soavaly Arabo, ampidiro ilay rohy izay navelanay fotsiny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Soavaly noti » ny hafa » Karazan-tsoavaly » Tantara sy fiavian'ilay soavaly arabo
Ny fikapohana ny soavaly dia fomba iray hahazoana fitokisana